Samarqandi, 13 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Caagadaha Loo Ekeysiiyo Haweenka Ee Lagu Xayeysiiyo Dharka Ayaa Nimankii Reer Bombay Loo Dacareeyey Oo Laga Mamnuucay Iney Khaawisaan Ama Daawadaan.
Magaalada Bombay ee dalka Hindiya ayaa laga mamnuucay sanamyada lagu xayaysiiyo dharka dumarka. Qorshahan oo ay soo jeedisay haweeney ka tirsan xisbiga BJP oo la yiraahdo Ghatkopar ayaa la meel mariyey, iyadoo laga bilaabo bisha April dukaanka lagu arko sanamyadaa la ganaaxi doono, isla markaana laga qaadi doono sanamyadaa dharka lagu xayaysiiyo.
Haweenayda u ololeynaysay in la joojiyo sanamyada dharka dumarka xiran ayaa ku dooday in asnaamtani yihiin kuwa maskax ahaan iyo fikir ahaanba u dhaawacaya nimanka Hindiya. Waxaa batay kufsigii iyo xadgudubyadii lagula kacayey dumarka Hindida waayo sawiro iyo sanamyo xunxun ayaa meel kasta yaala ayay tiri Ghatkopar oo ku faraxsan in qorshaheedii hirgalay.
Dad badan oo isugu jira aqoon yahano iyo siyaasiyiin ayaa iyana codkooda ku biiriyey taageerada ay u hayaan mamnuucida sanamyada anshaxa xun. Waxaan rajaynaynaa in Hindiya oo dhan arinkani gaadho oo magaalo kasta laga mamnuuco wax kastoo dhaqan xumo sida sanamyadan qaaqaawan oo kale ayuu yiri Duqa magaalada Bombay Sunil Prabhu.
Dadka kasoo horjeeda sharcigan ayaa sheegaya in sanamyadu aanay wax dhibaato ah u geysan cidna, isla markaana aanay nooleyn sidaa darteed ay qalad tahay mamnuucidoodu.